ဒင်္ဂါးပြားမာစတာ: ဤလှည့်ကွက်များနှင့်အခမဲ့လှည့်ဖျားမှုကိုရယူပါ Gadget သတင်း
Coin Master ဆိုတာကစမတ်ဖုန်းတွေအတွက်ရှာနိုင်သမျှအများဆုံးဖက်ရှင်ဂိမ်းတစ်ခုပါ။ ၎င်းတွင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိကစားသမားသန်းချီရှိပြီးသူတို့၏ဒဏ္adventာရီများထဲမှအခမဲ့ဒင်္ဂါးများနှင့်လှည့်ဖျားများကိုရှာဖွေရန်၎င်းတို့ထဲ၌တိုးချဲ့ရန်ဖြစ်သည်။ ဒီဂိမ်း၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာအခြေခံအားဖြင့်သန်းကြွယ်သူဌေးများဖြစ်လာစေရန်နှင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သောရွာကိုတဖြည်းဖြည်းတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်သည်။ ဒီဂိမ်း၏စက်ပြင်က slot များနှင့်တိုက်ပွဲများ၏စဉ်ဆက်မပြတ်အသေးစားဂိမ်းအပေါ်အခြေခံပြီး, တကယ်ရိုးရှင်းပါသည်။
သို့သော်၎င်းဂိမ်းသည်အောင်မြင်မှုတစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ မကြာသေးမီကမှ၎င်းသည်စွမ်းအားပြည့် Candy Crush Saga ထက်သာလွန်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိခဲ့ရသည်။ ကစားသမားများ၏အကြီးမားဆုံးမသေချာမရေရာမှုသည်လှည့်ဖျားမှုများနှင့်အခမဲ့ဒင်္ဂါးများမည်သို့ရရှိနိုင်ကြောင်းကိုမသိခြင်းဖြစ်သည်။ မြှင့်တင်ရန်“ ဒင်္ဂါးများ” သို့မဟုတ်“ အခမဲ့လှည့်ဖျားများ” ဟုခေါ်သည်။ ဤအခမဲ့လှည့်ဖျားများကိုဤဆောင်းပါးတွင်ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ဖော်ပြသမည့်လှည့်ကွက်အချို့နှင့်ရနိုင်သည်။
1 Coin Master ဆိုတာဘာလဲ?
2 Coin Master တွင်အခမဲ့လှည့်ဖျားမှုများရယူပါ
3 အံ့ဖွယ်ဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့မဟုတ် hack များကိုရှောင်ပါ
4 အခမဲ့အရင်းအမြစ်များကိုရရှိရန် applications များ
4.1 CM ဆုလာဘ်များ
Coin Master ဆိုတာဘာလဲ?
၎င်းသည် iOS သို့မဟုတ် Android စတိုးမှဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်သောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းမှာထူးခြားမှုရှိပြီး၎င်းမှာထူးခြားသည် ကျွန်ုပ်တို့ Facebook အကောင့်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်လိုသည်။ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ငါတို့ပြေးနေတဲ့ကောင်တာကိုအမြဲတမ်းမစောင့်ချင်ဘူးဆိုရင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ Facebook အဆက်အသွယ်များကိုဂိမ်းတွင်မှတ်ပုံတင်နိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်နောက်ထပ်အပိုငွေ ၂၅ ခုရနိုင်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဤအခမဲ့ဂိမ်းအမျိုးအစားများဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့ကိုအမှန်တကယ်ငွေဖြင့်တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူနိုင်သည်။
ဂိမ်းစက်ပြင်သည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်၊ ထို့ကြောင့်တိုက်ပွဲများမှာမရှုပ်ထွေးသေးပါ။ slots spins များကိုစတင်ခြင်းဖြင့်၎င်းသည်သင်၏ဆုများနှင့်အတူထိုထက်မကသောငွေများကိုအနိုင်ရလိမ့်မည်။ အရမ်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ဖို့ဒိုင်းလွှားတွေရနိုင်ပြီးသူကတခြားကစားသမားတွေရဲ့ရွာကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ခွင့်ပြုမှာပါ။ ၎င်းကိုကြိုးစားအသုံးပြုသူများသည်၎င်းသည်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ် မှစ၍ ချိတ်ကြောင်းသေချာစေသော်လည်း၎င်းသည်သေးငယ်သည့် RPG အစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူအခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။
Colossi ကို Candy Crush လိုအနိုင်ယူဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူပါဘူး။ ဂိမ်းတစ်ခုအနေနဲ့ပါ ၀ င်ပြီးလိုအပ်တဲ့အရာအားလုံးပါ ၀ င်ပါတယ် ၎င်း၏ဖြန့်ဖြူးသူများကအလွန်ရန်လိုမြှင့်တင်ရေးနောက်ကွယ်မှလည်းမရှိ။ သူတို့ရဲ့ကြော်ငြာတွေဟာနေရာတိုင်းမှာရှိပြီးကျော်ကြားသူတွေဖြစ်တဲ့ Jennifer Lopez၊ Emily Ratajkowski မှတယ်ရီ Crews အထိပါ။
ဒီဂိမ်းကကနေစတင်သည် slot machine နှင့်ငွေကိုအနိုင်ယူပြီးဂိမ်းကိုစတင်ရန်အတွက်၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သုံးရမည်။ ငွေမရှိဘဲအဘယ်သူမျှမထွက်ခွာလည်းမရှိ။ ဤစက်သည်ဂိမ်းကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ င်ငွေရင်းမြစ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤပိုက်ဆံ၏ကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်အရာဝတ္ထုများကို ၀ ယ်ယူနိုင်သည်။ အထက်ပါတူများ၊ ဒိုင်းများမှကျည်များအထိကျပန်းအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုတွေ့နိုင်သည်။
လှည့်ဖျား၌ဝက်အငယ်သုံးကောင်ထွက်လာရန်အခွင့်အရေးနည်းနည်းရှိသည်။ ဤသေးငယ်သောဝက်သုံးကောင်သည်“ ဒင်္ဂါးပြားမာစတာ” ကိုတိုက်ခိုက်ရန်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။ ဒီရန်ပွဲမှာငါတို့တွေကများများစားစားအနိုင်ရနိုင်ခြေရှိတယ် ငါတို့အောင်ပွဲခံလျှင်ငါတို့ဘဏ္offာတိုက်ပြည့်စေမည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုဂိမ်းထဲမှာတိုးတက်ဖို့အများကြီးအထောက်အကူပြုမယ့်တွန်းအားပေး။
ကျွန်ုပ်တို့တွင်အထူးလှည့်ဖျားများပါရှိသည်၊ ၎င်းထဲမှတစ်ခုသည်အပြာအရည်ပြွန်သုံးပြွန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားမစ်ရှင်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက် slot machine အတွက်နောက်ထပ်လှည့်ဖျားမှုများရနိုင်သည်။
အဆုံး၌, ဂိမ်း၏စိတ်ကူးအခြေခံသည်, ငါတို့ရွာကိုကြီးထွားအောင်လုပ်နိုင်စွမ်းပိုပိုပြီးအားကောင်းလာတယ်၊ အဲဒါကြောင့်တခြားကစားသမားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ် နှင့်သူတို့၏အရင်းအမြစ်များအားလုံးမှသူတို့ကိုလုယူ။ ဤအချက်၏ဆိုးကျိုးမှာကစားသမားတစ် ဦး သည်အမှန်တကယ်ပိုက်ဆံကို သုံး၍ နောက်တစ်ခုမသုံးလျှင်အခမဲ့အကြောင်းအရာကိုသာအသုံးပြုသောကစားသမားအားအားသာချက်ရှိလိမ့်မည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခမဲ့လှည့်ဖျားခြင်းများကိုမည်သို့ရနိုင်မည်၊ စစ်မှန်သောငွေကြေးဖြုန်းတီးရန်လိုအပ်ချက်ကိုလျှော့ချရန်ကြိုးစားသွားမည်ဖြစ်သည်။
Coin Master တွင်အခမဲ့လှည့်ဖျားမှုများရယူပါ
Coin Master တွင်အခမဲ့လှည့်ဖျားမှုအမြောက်အများကိုရရှိရန်တိုက်ရိုက်နှင့်အဓိကနည်းလမ်းမှာရည်ညွှန်းချက်ဖြစ်သည်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖိတ်ကြားချက်ကိုလက်ခံရန်ကျွန်ုပ်တို့၏သူငယ်ချင်းများကိုသာမေးပါ။ သူတို့မှတ်ပုံတင်ပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခမဲ့လှည့်ဖျား ၂၅ ခုသို့မဟုတ်လှည့်ဖျား ၂၅ ခုထပ်မံရရှိလိမ့်မည်။ သို့သော်ငွေပမာဏကိုလှည့်ဖျား ၄၀ အထိတိုးမြှင့်နိုင်သောအရောင်းမြှင့်တင်မှုများရှိလိမ့်မည်။ ဂိမ်း၏တရားဝင် Facebook အုပ်စုတွင် Coin Master သို့ရွှေကဒ်များပို့ရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပင်အခွင့်အရေးရှိသည်။
လိပ်များရရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုမှာဒိုင်းများကိုကိုယ်တိုင်ဖြတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီအတွက်ငါတို့ဟာမကြာခဏဂိမ်းထဲဝင်ပြီးငါတို့ရဲ့ရွာကိုပြိုင်ဘက်တိုက်ခိုက်မှုကနေကာကွယ်ပေးရတယ်။ ငါတို့စုဆောင်းလျှင်4သူတို့သည်အခမဲ့လှည့်ဖျားနှင့်ငါတို့ကိုဆုချပါလိမ့်မယ်။ စွမ်းအင်တောင့်တင်းမှတဆင့်အခမဲ့လှည့်ဖျားမှုများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သည်စွမ်းအင်သုံးတောင့်ကိုပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ထပ်အခမဲ့လှည့်ဖျား ၁၀ ခုကိုရနိုင်သည်။ ဒီရွေးချယ်မှုနှစ်ခုကကစားခြင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆုချတယ်၊ ဒါကြောင့်ဒီလှည့်ဖျားမှုတွေရဖို့အတွက်ပိုပြီးကျေနပ်စရာကောင်းလိမ့်မယ်။
ဒင်္ဂါးများကိုဒင်္ဂါးများရရန်အထိရောက်ဆုံးနှင့်ပျော်စရာအကောင်းဆုံးနည်းမှာစစ်ပွဲတွင်အသုံးပြုသူများနှင့်ရင်ဆိုင်ရခြင်းဖြစ်သည်သူတို့ကိုနိုင်ရင်ကောင်းတဲ့ဆုတွေရလိမ့်မယ်။ ပျော်စရာအဖြစ်တစ်ချိန်တည်းမှာဤနည်းလမ်းသည်အနည်းငယ်အန္တရာယ်ရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့ရှုံးနိမ့်ပါကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်ပေးလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားတိုးတက်ရန်အရင်းအမြစ်အမြောက်အများကိုထောက်ပံ့ပေးမည့်အကျိုးအရှိဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ငွေကြေးရှာဖွေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သောအရာများအနက်တူးဖော်မှုများပြုလုပ်သောအခါတူးဖော်ရန်၊ အကြွေစေ့ပုံစံဖြင့်ရတနာများကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်၊ အကြံပြုချက်မှာသင်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နေသောတွင်း ၂ ပေါက်ကိုထိရန်ဖြစ်သည်။ အကြွေစေ့များရှိလျှင်စက္ကန့်အနည်းငယ်အဘို့အလမ်းတူးနှင့်လိမ့်မည် သင်သည်များစွာသောငွေကိုယူဆောင်ရလိမ့်မည်။ အလျင်အမြန်ကစားရန်လိုကောင်းလိုလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ပျက်ကွက်ခြင်းနှင့်ဘာမှမအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်နိုင်သောကြောင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်။
အံ့ဖွယ်ဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့မဟုတ် hack များကိုရှောင်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒင်္ဂါးများသို့မဟုတ် Coin Master အခမဲ့လှည့်ဖျားမှုများအတွက်အင်တာနက်ပေါ်တွင်အမြန်ရှာဖွေပါက YouTube ရှိဗီဒီယိုအမြောက်အများကိုသံသယဖြစ်ဖွယ်ကောင်းသော ဦး စားပေးဝက်ဘ်စာမျက်နှာများသို့ညွှန်ကြားထားသည့်လင့်ခ်များပါရှိသည်။ သူတို့အားလုံးနီးပါးတွင်ရဝုဏ်သည်ရှင်းပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏အီးမေးလ်ကိုသင်မှတ်ပုံတင်ပြီးပေါင်းသင်းပါကဒင်္ဂါးပြားနှင့်ရင်းမြစ်များစွာကိုအခမဲ့ရရှိလိမ့်မည်ဟုသူတို့ကတိပေးသည်။ မင်းဖတ်တာကိုမယုံနဲ့ ၎င်းတို့အားလုံးသည်လိမ်လည်လှည့်စားသောအီးမေးလ်များကိုစတင်ရန်သင်၏ဒေတာသို့မဟုတ်သင်၏အီးမေးလ်ကိုအသုံးပြုရန်ကြိုးစားသောလိမ်လည်မှုများဖြစ်သည်။
ဤဝက်ဘ်စာမျက်နှာသည် spam သို့မဟုတ် junk folder ထဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောအီးမေးလ်အားလုံး၏ရင်းမြစ်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ပရိုဂရမ်မျိုးတစ်စုံတစ်ရာတပ်ဆင်ပါကသင်၏ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်ဖုန်းမှသတင်းအချက်အလက်များကိုခိုးယူရန်သူတို့သည် Trojans များကိုပင်သုံးနိုင်သည်။ ကျနော်တို့လုံးဝမဆိုထိုကဲ့သို့သော option ကိုဖယ်ထုတ်ပါလိမ့်မယ်။
အခမဲ့အရင်းအမြစ်များကိုရရှိရန် applications များ
အခမဲ့လှည့်ဖျားခြင်းနှင့်ဒင်္ဂါးများအတွက်ကမ်းလှမ်းမှုများ (သို့) ပရိုမိုးရှင်းများကိုသင် ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်အထောက်အကူပြုမည့်တရားဝင်အသုံးချမှုအချို့ရှိပါသည်။ သူတို့ထဲကတချို့ကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်သွားမှာပါ။
အများဆုံးအကြံပြုထားတဲ့သံသယမရှိဘဲ, ကလျှောက်လွှာဖြစ်ပါတယ် လူမှုမီဒီယာမှတဆင့်အခမဲ့ကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်အရင်းအမြစ်များကိုရှာဖွေပါ, အသုံးပြုသူများသည်တက်ကြွခြင်းနှင့်ဂိမ်းမှလျှက်ရှိကြောင်းစောင့်ရှောက်ရန်ဖြန့်ချိနေကြသည်။ ဤအပလီကေးရှင်းကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဤဒြပ်စင်များအားလုံးကိုရှာဖွေရန်သို့မဟုတ်သတိမပြုရန်မလိုအပ်ပါ။ လျှောက်လွှာကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးလက်လှမ်းမီလိမ့်မည်။
ထို့အပြင်ဤအပလီကေးရှင်းသည်သင်၏အလောင်းအစား x5 ကိုများပြားစေနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်မင်းရဲ့ဆုတွေရရင်5နဲ့မြှောက်ရလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ရန်သူများကိုတိုက်ခိုက်ရန်နှင့်သူတို့၏ဒင်္ဂါးများကိုခိုးယူရန်အတွက်တစ်ချောင်းသို့မဟုတ်သံတူ ၅ လုံးဖြင့်သန်းနှင့်ချီသောဒင်္ဂါးများကိုသင်ရနိုင်သည်။ ဤလျှောက်လွှာနှင့် ပတ်သက်၍ အဆိုးဆုံးအချက်မှာ၎င်းတွင်ပါရှိသောကြော်ငြာသည်ကျူးကျော် ၀ င်ရောက်ခြင်းဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနေသောအခါစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါသည်။
ဤကဏ္ very ရှိနောက်ထပ်လူကြိုက်များသည့် application တစ်ခုဖြစ်ပြီး application store ၌ download ပေါင်း ၁၀၀၀၀၀ ကျော်ရှိသည်။ ၎င်းအားဖြင့်တစ်နေ့လျှင်ပျမ်းမျှအခမဲ့လှည့်ဖျား ၃၀ ကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သည်။ ဂိမ်းထဲမှာတိုးတက်သည့်အခါဘယ်ကျွန်တော်တို့ကိုရန်အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါ interface ကိုအတော်လေးကြံ့ခိုင်ပေမယ့်အလွန်အလိုလိုသိသည်နှင့်သူကသူနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ဖြစ်လာဖို့ဘာမှကုန်ကျမည်မဟုတ်။
အညီအမျှပိုမိုကြမ်းတမ်းသောမျက်နှာပြင်ရှိသည့်ယခင်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ သူမနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်ဤမျှလောက်ရနိုင်သည် အခမဲ့ဒင်္ဂါးပြားလှည့်ဖျားအဖြစ်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုအဘယ်အရာကိုစိတ်ဝင်စားသည်ကိုရှာဖွေရန်ကဏ္ each တစ်ခုစီကိုသာထည့်ပါ။ ဒင်္ဂါးများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အတွက်လက်နက်များ၊ ဤအရင်းမြစ်အားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လည်ပတ်မှုများကိုပြန်လည်တင်ဆက်ရန်မစောင့်ဘဲဂိမ်းတွင်တိုးတက်ရန်အရေးကြီးသည်။
Spin Master - အခမဲ့လှည့်ဖျားများနှင့်ဒင်္ဂါးပြားအကြောင်းအချက်များ
ရေးသားသူ: Prayosha ပလာဇာ
အရင်နဲ့မတူတာကပိုပြီးကြည့်ရလွယ်ကူတဲ့ interface ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်တယ်။ ၎င်းသည်အလိုလိုသိပြီးမှတ်ပုံတင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ သင်ရရှိမည့်လှည့်ဖျားများသုံးစွဲခြင်းနှင့်တစ်နေ့လျှင်ပျမ်းမျှလှည့်ဖျား ၃၀ သာရရှိနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သတိရသင့်သည်။ ဒါမှမဟုတ်ပျက်ကွက်လျှင်တစ်နေ့လျှင်အကြွေစေ့တစ်သန်းရှိသည်။ အနည်းငယ်သာထင်ရသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ပြေးစက်များပြန်လည်ပတ်ရန်စောင့်နေခြင်းထက်ပိုကောင်းလိမ့်မည်။
ဤအကြံပေးချက်များနှင့်လှည့်ကွက်များကသင့်ကိုကူညီပါလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည် မှတ်ချက်များကဏ္inတွင်ပါ ၀ င်ရန်သင်ပါ ၀ င်ရန်ဆုံးဖြတ်ပါကကျွန်ုပ်တို့ကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မည်။ ဒင်္ဂါးပြားမာစတာတွင်အချမ်းသာဆုံးဖြစ်ရန်ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်မည်သည့်အကူအညီကိုမဆိုလက်ခံနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » နေအိမ် » ဂိမ်းတွေကက » ဒင်္ဂါးပြားမာစတာ - ဒီလှည့်ကွက်တွေနဲ့အခမဲ့လှည့်ဖျားမှုကိုရယူပါ